2 Siyaabaha la wadaagno Lugood Library fudud
Mid ka mid ah qalab Apple oo keliya uma muuqato in ay maalmahan ku filan!
Aad iPad iyo iPhone Qaadashada la socoto aad MacBook u muuqataa in ay iska caadi ah. Ecosystem tufaaxa waxay la shaqeysaa run ahaantii si fiican u wada sida ishiisa inankeeda, dhif ah meelaha fiican cid kale. Qalabka oo dhammu waa ku dhawaad ​​falsafadda oo ku nuuxnuuxsaday on design macdan ah oo nadiif ah oo karo dhisay. Apple doonayaa in aad u hagaagsan qalabka oo dhan la maktabadda isla Lugood, inkasta oo uu leeyahay taxne kore iyo hoose ah.
In tutorial tan aynu eegno sida maktabadda Lugood la wadaagi karto ka mid ah qalabka kala duwan. Tutorial Tan waxaa loo jebiyey laba qaybood oo kala duwan, qayb 1 diiradda saarayaa dadka jecel in hab inankeeda inay sameeyaan waxyaabo iyo part 2 waa mucaaradka ee ka jecel in ay sameeyaan wax ay maraan jidkii sida ay u ogolaanaya xoriyadda iyo muuqaalada dheeraad ah oo aan rigoore kasta. Haddii aan ugu buuqaysaan oo dheeraad ah
Part1: wadaag maktabadda music Lugood on network guri
Part2: wadaag maktabadda Lugood si aad u qalab macruufka anther
Waxaad dooran kartaa in aad sii qulquli music badan network gurigaaga ama ay doortaan in ay la wadaagto qalabka kale ee network guriga.
Si aad u sii qulquli aad music via Lugood raac talaabooyinkan;
Tag menu Edit iyo aad rabtid dooro (Windows OS) ama aad rabtid menu (on Mac).
Laga soo bilaabo liiska dusheeda tabs, doorashada "Sharing" tab.
Hubi fursad u "Share aan maktabadda on my network deegaanka". Waxa uu ku siinayaa ikhtiyaarka in ay wadaagaan wax walba ama liiska play soo xulay.
Haddii ay sidaas aad rabto in aad wax walba la wadaago siyaadsadaan sirta ah.
Marka aad ka dhigay doorashada riix OK.
Mid ka mid ah wax in la ogaado waa in Lugood aad wadaagtan maktabadda waa in ay u furan yihiin kuwa kale in ay ku xidhmaan waxa ay u sii qulquli iyo muusiga. n
Marka taasi la sameeyo qof network degaankaaga isku arki karin playlists aad la wadaago iyo qulquli music waa in.
Si kale si aad ula wadaagto content waa via doorasho Home Sharing. Apple kuu ogolaanaya in aad si aad ula wadaagto music iyo files leh aaladaha kale ee la oggol yahay in ay isticmaalaan aqoonsiga isla Apple.
Tag ah File oo Home Sharing.
Daar Home Sharing.
Ku qor Apple ID iyo password markii keentay in (Oggolaanshaha laga yaabaa baahan yahay haddii aan horay u samaynin).
Ku celi tallaabooyinka kor ku xusan ee kombiyuutarada kale si ay awood qaybsiga guriga iyo u eegto waxa ku jira la wadaago iyaga on.
Mid ka mid ah waa inuu ogolaado hab ku xusan Qaybta 1aad ee waa arrin xadiday. Ilaalinta Lugood furan waqti kasta oo lagu daray hoorto music halkii dhab ahaantii haysta, waxay ka dhigan tahay in aad u baahan tahay in qalab badan oo ku shaqeeya ee waqti isku mid ah. Maxaa dhacaya haddii aadan rabin in? Maxaa dhacaya haddii aad kaliya ma si ay u gudbiyaan kartaa ururinta on ka mid ah qalabka ay u qalab kale oo aad leedahay? Mid ka mid ah ereyga jawaab, "TunesGo".
Wondershare TunesGo kuu ogolaanaya in aad nuqul ka maktabadda Lugood aad ka mid qalab macruufka in kale, sameynta nidaamka oo dhan super fudud oo degdeg ah. Ma ahan codsiga lacag la'aan ah waxay u baahan tahay in la iibsaday ku dhiirigelinayaan in uu. Waxay bixiyaan version tijaabo ah oo loo isticmaali karaa muddo waqti go'an ka dib markii taas oo ka codsan doona diiwaan gelinta si ay u isticmaalaan. Isticmaalka weyn ee TunesGo waa in ay bixiyaan xal isku dhafan kuwaas oo caawin doona in ay maareeyaan music digital hab ku haboon.
Step1: Just furaysto in labada qalabka galay kombiyuutarka. Xawaaladaha TunesGo
Step2: Dooro in aad nuqulka in qalab kale
TunesGo iskaan doonaa warbaahinta iyo ku siin iyadoo ay xulashada ah in ay doortaan waxa aad rabto in aad nuqulka.
Step3: Marka aad aad doorashada u bilaabi doonaan in ay nuqul ka kooban xusaa in qalab labaad.
Ama waxaad kaliya furi karaa maktabadda ee TunesGo iyo dooranayaan dhoofinta in ay ama nuqul ka faylasha ay u qalab ama meel kale ee kombiyuutarka ah.
Waxaa si aad siyaabo badan nuqul ka files ka mid qalab si kale isticmaalaya TunesGo iyo qayb ka mid ah ugu fiican yahay oo aadan xataa u baahan tahay inaad gasho galay ID Apple aad, fudud oo ay, ay si degdeg ah oo lacag la'aan ah ka kaaftoomi. Its TunesGo!
Habka ugu fudud ee lagu nadiifiyo Lugood
Easy Siyaabaha Copy Music ka Lugood in Flash Drive
Sidee si ay u gudbiyaan Lugood Music in Computer kale
> Resource > Lugood > 2 Siyaabaha la wadaag Lugood Library Your